आजदेखि सोह्र श्राद्ध सुरु, के के गर्न हुँदैन ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
५ आश्विन २०७८, मंगलबार १२ : ४८ बेलुका
काठमाडौं । ‘श्रद्धया इदं श्राद्धम्’ अर्थात् पितृका लागि श्रद्धापूर्वक गरिने कर्म नै श्राद्ध हो ।
आजदेखि सोह्र श्राद्ध सुरु भएको छ । भाद्र शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि औँशीसम्म अर्थात् १६ दिन तिथिअनुसार श्राद्ध गरिने भएकाले यसलाई सोह्र श्राद्ध भनिएको हो ।
कांग्रेस फकाएर कम्युनिस्ट मिलाउन सफल होलान प्रचण्ड ?
एनजिओले सरकारलाई कठ्पुतली बनायो, गरिबको नाममा मौलाएको भ्रष्ट्राचार
महराका लागि फर्गेट यस्टर्डे : कति सहज, कति असहज ?
के हो एमसीसी ? यस्तो छ भ्रम र यथार्थ